rar file error [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Other Problems » rar file error [Problem]
1 rar file error [Problem] on 11th April 2010, 4:37 pm
rar ဖိုင်တွေကိုဖြည်လိုက်ရင် (Extract) လုပ်လိုက်ရင် CRC fail ဆိုပြီး error msg တစ်ခုပြပြီး ဘာဖိုင်မှမရလိုက်ဘူး ... အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါဦးဗျာ... အခုကျနော် rar repair tool ကိုသုံးကြည့်ပြီးပြီ ... မရပါဘူးဗျာ... ဆိုင်လားမဆိုင်လားမသိပေမယ့် အခုကျနော် rar ထဲက repair archive ဆိုတာကိုလည်း auto ပြင်ခိုင်းကြည့်တယ် ... မရပါဘူးဗျာ... ဘယ်လိုနည်းလမ်းများရှိကြသေးလဲဆိုတာလမ်းညွှန်ပေးပါဦးဗျာ...
2 Re: rar file error [Problem] on 11th April 2010, 6:34 pm
ကို Mars ရေ.
Rar file ဖန်တီးနေတုန်း Something failure ပေါ့နော်..
တစ်ခုခုပေါ့ ချို့ ယွင်းမှုရှိရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်
အဲဒါဆို ပြန်ဖြည်ရင် error တက်တတ်တယ်.
ရှာလို့ ရမယ်ဆို အသစ်သာ ထပ်ဒေါင်းလိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ
ဦးနှောက်စားခံမနေပါနဲ့ (တစ်ကယ်တော့ ကျနော်မသိလို့ ပါ)
3 Re: rar file error [Problem] on 11th April 2010, 9:06 pm
ကျနော်က အကျိုးအကြောင်းသိချင်တာပါ.... ဘာလို့များ rar ဖိုင်တွေအတွဲလိုက်ဒေါင်းပြီးလို့ ပြန်ဆက်တဲ့အခါ အဲလိုမျိုးတွေကြုံနေရလဲဆိုတာ မသိလို့... တစ်ခြား HJ Split တို့ ဘာတို့နဲ့ခွဲထားတာတွေကို ပြန်ဆက်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး... rar နဲ့ဆို 10 ခါဆို7ခါလောက်က အဲလို error တတ်တော့ ဆွဲထားတာတွေအလကားပဲ... ပြန်ဆွဲတော့လည်း မထူးဘူးဆိုတော့ စပြီးဖိုင်တွေစခွဲကတည်းများဖြစ်တာလားမသိဘူး... အဲလိုမျိုးတွေဆို ဘယ်လိုများပြန်လည်ပြုပြင်လို့ရမလဲဆိုတာသိချင်တာပါ... ကျေးဇူးပဲဗျာ...
4 Re: rar file error [Problem]